'गाई काट्ने' विषयमा फेसबुके विवादबारे कलाकार दिपकराज गिरीको कडा व्यङ्ग्य !
‘गाई काट्ने’ विषयमा फेसबुके विवादबारे कलाकार दिपकराज गिरीको कडा व्यङ्ग्य !
चैत १२, २०७४ BNNTV
काठमाडौं । अहिले नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईको विषय धार्मिकतासँग जोडेर निकै विवादित बनाईएको छ। केहिदिन पहिले प्रदेश नम्बर ३ की उपसभामुख राधिका तामाङले गाईकै विषयमा निकै ठूलो आलोचना खेपेकी छन्।
यतिमात्र कहाँ हो र, गाईकाण्डको विवादमा तनिएकी पसभामुख तामाङले आफ्नो चरित्र हत्या गर्न प्रयास भएको भन्दै अदालत जाने चेतावनी समेत दिएकी छिन् । तामाङले बिना कारण आफुलाई यो विवादमा तान्ने काम भएको भन्दै अब अदालतीय उपचारमा जानुको विकल्प नरहेको समेत बताएकी छन् गाईकै विषयमा उपसभामुख तामाङले गाईको मासु खान पाउनुपर्ने र गाई काट्नेलाई जेल हाल्ने कानुन संशोधन गर्नु पर्छ भनेको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भएको छ । कहास्गारी उनकै गृहजिल्ला नुवाकोटमा यो विषयले ठूलो हंगामा भएको छ। त्यहाँ सर्वसाधारण देखि कांग्रेस नेता कार्यकर्ता सडकमै उत्रिएका छन्। नुवाकोट कांग्रेसको निर्देशनमा शनिबार साँझ नेविसंघ नुवाकोटले विरोध जुलुस निकालेको थियो ।
यतिखेर सामाजिक सञ्जालहरुमा गाई काटेर मासु खान पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा धेरै चर्को विवाद भैरहेको छ। देशको राष्ट्रिय जनवार कुनै पनि देशमा मर्न र खान नपाईने अन्तराष्ट्रिय नियम हुँदा हुँदै पनि यो विषयलाई बिना कारण अतिरन्जित बनाएर अगाडि ल्याईदै छ। वास्तवमा कुरा के हो भने, केहि ब्यक्तिहरुले धर्मनिरपेक्षताको अवारणमा गाईलाई हिन्दुहरुले पूजा गर्ने भएकै कारण काट्न नदिईएको भन्दै यतिबेला यो विषयलाई विवादमा ल्याउने चेस्टा गरिरहेका छन्।
त्यसैगरी समसामाहिक र राजनैतिक विषयको तिखो विश्लेष्ण गरी कुविचार र विसंगतीको चर्को ब्यक्ग्य गर्ने चर्चित अभिनेता तथा हास्य कलाकार दीपकराज गिरीले पनि यस विषयमा खरो व्यंग्य प्रहार गरेका छन् ।
आफ्ना व्यंग्यात्मक शब्दहरु सधै जसो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका भित्तामा प्रकाशन गर्ने गिरीले गाईकाण्डका विषयमा देशकै गृहमन्त्रीलाई गुहारेका छन्। निकै व्यंग्यात्मक शैली अख्तियार गर्दै उनले गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्छन्।
हाम्रो सुरक्षा त हामि आफै गरौला
गाइ बस्तुको सुरक्षा गरिदिनु पर्यो प्लिज… गाइले गर्दा भाइ भाइमा मारामार होला….”
दिपकराज गिरीको स्टाटस:
प्रकाशित : सोमबार, चैत १२, २०७४१७:३५
५५ मिनेट अगाडि बिगुल
५८ मिनेट अगाडि रासस